गुल्मीका राजनले मलेसियामा ईण्डोनेसियन केटीसँग दिल साटेपछ…
चमकधमकले भरिएको झिलीमिली मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुर । नियोन लाइटको प्रकाशमा लुटपुटिने सहरको रात र तीव्र आर्थिक वृद्धिदरमा हुइँकिरहेको सहरको जीवन । गुल्मीमा जन्मेका तर तन्नेरी जीवनको आधा समय मलेसियामा दु:खको अँध्यारोमा बिताएका गुल्मीका राजन थापा, ३७ लाई यस्ता कुराको ‘छु मतलब’ । क्वालालम्पुरबाट करिब ३० किलोमिटर परको ग्यान्टिङ हाइल्यान्डको सानो पहाडी थुम्कोमा करिब १५ वर्षयता पहाड खोस्रिरहेका उनलाई दायाँ–बायाँ सोच्ने त फुर्सदै छैन । उनी जहाँ बस्छन्, त्यहाँबाट आकाश खुला भएका बेला नियालेर हेर्‍यो भने क्वालालम्पुरको छेउछाउमा अग्लिरहेका अट्टालिकाहरू देख्न सकिन्छ । आफ्नै दु:खको अग्लो पहाडमा उभिएपछि पराई देशको विकास र चमकधमकजस्तो लागे पनि के अर्थ ?
२१ वर्षे उमेरमा मलेसिया छिरेका राजनको जीवन ग्यान्टिङ हाइल्यान्डका पहाडी थुम्कोमा उक्लिएका बाटाहरूजस्तै घुम्तीहरूले भरिएको छ । सन् २००२ मा मलेसिया छिर्दा उनी २१ वर्षका मात्रै थिए । जुंगा भर्खरै बाक्लिन थालेको थियो । काम थालेको केही महिनामै उनले थाहा पाए, उनी मेडिकल फेल भएछन् । नेपालमा पास भएको मेडिकल जाँच मलेसियामा कसरी फेल भयो ?
एक रात राजन सटुक्क कम्पनी छाडेर भागे । यसरी भागेपछि सुरु भयो उनको अवैध अर्थात् कागजातविहीन कामदारको परिचय । किनकि कम्पनीले होल्ड गरेर राखेको पासपोर्ट उनीको हातमा हुने कुरै भएन । एकाध दिनको भागदौड र आलसतालसपछि उनले एउटा क्यासिनोमा गार्डको काम पाए । त्यहाँ पनि उनलाई सोचेजस्तो र भनेजस्तो भएन । त्यसपछि उनी अनेकन नेपालीको सम्पर्क सूत्र पहिल्याएर आइपुगे, ग्यान्टिङ हाइल्यान्डको पहाडी थुम्कोमा ।
झन्डै १४ वर्षयता स्वेदश नर्फकी यहीको पहाडी थुम्कोको माटो खोस्रिरहेका उनी बासको टेकोमा फ्लेक्स प्रिन्टले बारेर सानो कटेरोजस्तो घर बनाएर बसेका छन् । त्यही नजिकै उनले एक जना चिनियाँका २ हेक्टर जमिन वार्षिक पाँच हजार रिंगिट अर्थात् करिब एक लाख २५ हजार नेपाली रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा भाडामा लिएका छन् । जहाँ उनी मौसमअनुसार खुर्सानी र सिमी फलाउँछन् ।
ग्यान्टिङ आएपछि राजनलाई केही सजिलो भएको छ । किनकि ग्यान्टिङको माटो खोस्रिँदाखोस्रिँदै राजनको दिल एक जना इन्डोनेसियन केटीसँग साटिएको पनि पाँच वर्ष बितिसक्यो । नसाटियोस् पनि किन, उमेरको रापतापमा पनि उनले भर्खर बिहे गरेर घरमै पत्नी छोडेर आएका थिए । काममा सहयोग गर्ने कोही भइदिए नि हुन्थ्यो भन्ने उनी सोचिरहेका थिए । त्यही बेला इन्डोनेसियन केटी डिन्डासँग सुटुक्टै मन साटिएको उनले पत्तै पाएनन् ।
आमाको यादले मात्रै उनलाई घरसम्म तान्न पनि सकेको छैन् । बढो अनौठो मजधारमा फसेको छन् उनी । डिन्डाको मायाले उनलाई यतै लपेटेको छ । मासिक २०/२५ हजार रुपैयाँ भए पनि आम्दनी भइरहेको छ । राजनले भने, ‘न भन्नेबित्तिकै नेपाल फर्किन सक्छु । फेरि उता गएर पनि के पो गर्ने ?’